မြန်မာနိုင်ငံသား ဇနီးမောင်နှံ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်စဉ် ထိုင်းရဲများက ငွေတောင်းယူပြီး ရိုက်နှက်ကာ အိမ်စာချုပ် သိမ်းဆည်းသွားသည်ဟုဆိုကာ မကျေနပ်၍ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒထုတ်ဖော် - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံသား ဇနီးမောင်နှံ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်စဉ် ထိုင်းရဲများက ငွေတောင်းယူပြီး ရိုက်နှက်ကာ အိမ်စာချုပ် သိမ်းဆည်းသွားသည်ဟုဆိုကာ မကျေနပ်၍ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
မြဝတီ၊ ဇူလိုင် ၇
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးနှင့်¤င်း၏ဇနီးတို့သည် အထောက်အထားအပြည့်စုံဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလည်သွားရောက်စဉ် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ထော်ဂိတ်အ ရောက်၌ ထိုင်းရဲများက ၎င်းင်းတို့ထံမှ ငွေတောင်းယူပြီးရိုက်နှက်ခဲ့သည့်အပြင် ၎င်းင်းပိုင်အိမ်စာချုပ်အား သိမ်းဆည်းသွားသည်ဟုဆိုကာ ကျေနပ်မှုမရှိ၍ ဇူလိုင် ၇ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲက မြန်မာ-ထိုင်း အမှတ်(၁) ချစ်ကြည်ရေးတံတားကြီးပေါ် (မြန်မာဘက်ခြမ်း)၌ တစ်ကိုယ် တော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”သူကမွန်ပြည်နယ်မုဒုံမြို့ကဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကို အထောက်အထားပြည့်စုံစွာနဲ့သွားရောက်ခဲ့ပြီး စစ်ဆေးရေး ဂိတ်တစ်ခုက ထိုင်းရဲတွေရဲ့ငွေညှစ်မှုကိုမကျေနပ်လို့ ဘန်ကောက်ထိ မသွားတော့ဘဲပြန်လာပြီး အခုလိုတံတားပေါ်မှာဆန္ဒပြတာပါ။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့က ဆန္ဒထုတ် ဖော်တဲ့စည်းကမ်းတွေကို ပြောပြပြီး တားဆီးတာကို သူကလည်းနား ထောင်တဲ့အတွက် သူ့ကိုရဲစခန်း ခေါ်လာပြီးသူ့ရဲ့နစ်နာမှုတွေကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ”ဟု မြဝတီမြို့မရဲစခန်းမှူးဒုရဲမှူး နိုင်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
တစ်ကိုယ်တော်ဆန္ဒထုတ် ဖော်နေမှုကို မြဝတီမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုတိယရဲမှူးနိုင်ဝင်းနှင့်တာဝန်ရှိသူများက သွားရောက်တားဆီးကာ စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည့်အတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူသည် ဆက်လက် မပြုလုပ်တော့ဘဲ ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
”ကျွန်တော်က ဇနီးနဲ့အတူဘန်ကောက်ကို ဇူလိုင် ၄ ရက်က အထောက်အထားအပြည့်အစုံနဲ့သွားခဲ့တာပါ။ လမ်းမှာဂိတ်အားလုံး ကစစ်ဆေးပြီး အားလုံးပြည့်စုံတဲ့ အတွက်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမယ့် ”မယ်ထော်” ဂိတ်က ထိုင်းရဲတွေက ကျွန်တော်တို့ လင်မယားကို ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၂ဝဝ စီတောင်းတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်းမပေးဘူး။ ဒါကိုမကျေနပ်လို့ ကျွန်တော့်ကိုပါးတွေ နားတွေရိုက်တယ်။ နောက်ဆုံး ဘတ် ၅ဝဝ စီ ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော့် အိတ်တွေဖွင့်ရှာပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်ဝယ်တဲ့စာချုပ်အစစ်နဲ့ အိမ် သော့ကိုသိမ်းယူလိုက်ပြီး မြန်မာ ပြည်ပြန်ခဲ့တယ်။ ဒါသက်သက် အနိုင်ကျင့်တာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ မြန်မာဘက်ခြမ်း ကတံတားကြီးပေါ်မှာ ထိုင်းရဲတွေ ရဲ့ယုတ်မာကောက်ကျစ်မှုအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာပါ”ဟု မုဒုံမြို့ နေ ကိုနေလင်းထွန်းက ပြောကြား သည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ကိုနေလင်းထွန်းထံမှ ထိုင်းရဲများသိမ်းဆည်းခဲ့သော အိမ်အရောင်း အဝယ်စာချုပ်နှင့် အနိုင်ကျင့် တောင်းယူလိုက်သောဘတ်ငွေ ၁ဝဝဝ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် မြဝတီရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှူးက ထိုင်းနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အိုင်ဗရီကို့စ် International Series ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ ချန်ပီယံဖြစ်
ကိုရီးယား အလုပ် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် လျှောက်လွှာထုတ်ယူသူ သုံးသောင်းကျော်ရှိ၊ လုပ်ငန်း အမျို
စစ်တောင်းမြစ်ရေ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် တောင်ငူမြို့တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပေါ်ကာ ဒေသခံအချို??
အမေရိကန် ဗားမောင့် ပြည်နယ်၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖြစ် လိင်ပြောင်းလဲထားသူ တစ်ဦး အရွေးချယ်ခံရ
စာသင်ခန်း၌ စာသင်ခုံ လုံလောက်မှု မရှိသောကြောင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာသင်ကြားရာတွင် အ?
ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ယောဂကျင့်စဉ်အကြောင်းကို တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်အပါအဝင် အားကစ??